Magaalada Baladweyne Ee Gobalka Hiiraan Ayaa Haweeney saygeeda ku dishay – STAR FM SOMALIA
Mid ka mid ah haweenka ku dhaqan Magaalada Baladweyne Ee Xarunta Gobolka Hiiraan, ayaa waxay xalay ku dishay Magaaladaasi saygeedii, ka dib khilaaf ka dhex taagnaa maalmihii la soo dhaafay.
Dhacdadan, ayaa ka dhacday Xaafadda Kooshin, iyadoo haweeneydu ay dilka saygeeda u adeegsatay toorey/mindi, waxayna kaga dhuftay qaybaha kore ee jirkiisa.
Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Cabdi Aadan, ayaa daqiiqado ka dib ugu geeriyooday hoygiisa, markii tooreyda ay kaga dhacday meel halis ah.
Ciidanka Booliska Magaalada Baladweyne oo ku baxay hoyga uu dilku ka dhacay, ayaa gacanta ku soo dhigay haweeneydaasi, oo xilligan su’aalo lagu weydiinayo Xarumaha Boolisku ku lee yihiin Magaalada.
Cabdalla Cumar Jeelow oo ka mid ah dadka degan Magaalada Baladweyne, ayaa starfm u sheegay dhacdadaasi inay ahayd mid ay ka wada naxeen bulshada reer Baladweyne.
Jeelow, ayaa sheegay haweeneyda dilka gaystay in maalmihii ugu dambeysay uu khilaaf soo kala dhexgalay saygeeda, ka dib markii ay isu qabteen arrimo uun la xiriira qoyska.
Baladweyne waxaa si weyn looga hadalhayaa dilkaasi, iyadoona ay dadku isla dhex marayan dilka ay gaysatay haweeneydu.